Fetin’ny Krismasy sy faran’ny taona : anarivony ny zandary, polisy, miaramila hahetsika | NewsMada
Fetin’ny Krismasy sy faran’ny taona : anarivony ny zandary, polisy, miaramila hahetsika
Fanamafisana ny fijerena akaiky ireo faritra mafana amin’ny asan-jiolahy, ireo toerana fanaovana fety, fandrindrana ny fifamoivoizana… Ireo ny hiompanan’ny asa ataon’ireo mpitandro filaminana (zandary, polisy, miaramila) arivo mahery, ao anatin’ny OMC, faritra Analamanga, amin’izao fetin’ny Krismasy sy faran’ny taona izao.
Fantatra fa hahetsika ny mpitandro filaminana miisa 1.000, mandritra ny fety roa miantoana, ny fetin’ny Krismasy ny faran’ny taona ary ny taom-baovao eto Antananarivo sy ny manodidina, taorian’ny fivoriana niarahan’ny OMC (Organe mixte de conception) sy ny faritra Analamanga teny Androndra. « Ho fanamafisana ny fitandroana ny filaminna mandritra ny fety sy hanaovan’ny olona fety am-pitoniana izao hetsika izao », hoy ny fanazavana.
Anisan’ny hosahanin’ireo mpitandro filaminana ihany koa ny fandrindrana ny fifamoivoizana, fiambenana ireo faritra mafana sy ny misy fety rehetra. « Mila fiaraha-miasa amin’ny vahoaka hatrany anefa izahy mba hampirindra antsakany sy andavany ny asa hiandraiketana », hoy ny fanamafisana.
Mazava ho azy, ahitana ireo mpitandro filaminana mitambatra ireo izany ny toerana rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina. Hiparitaka any amin’ireo tena be asan-jiolahy izy ireo, ary heverina fa hiasa andro aman’alina. Maro ireo toerana isehoana asan-jiolahy matetika, eny fa na fanendahana aza, izay anisan’ny mampikaikaika ny olona rahateo.
Ireo mpanendaka rahateo, efa mivatsy fitaovam-piadiana ary misy aza ny mitana basy mihitsy sady mahavita mamono olona. Mety hihena izany ny asa fanendahana na ho foana mihitsy mandritra ny fety, sady fanararaotan’ireo olon-dratsy hanendahana sy hanafihana mihitsy.
Efa fanao isan-taona
Hetsika efa fanao isan-taona ihany ny toy ity, mitovy amin’ny Paska sy Krismasy ieren-doza hatramin’izay. Miandrandra ireo mpitandro filaminana ireo ny vahoaka, noho izany, indrindra fa amin’ny asan-jiolahy. Hita fa manao sesilany hatrany ny asa ratsin’izy ireo ary manaporofo izany ny fanafihana nahafatesana olona iray teny Andriantany Ambohitrimanjaka afakomaly alina. Teny Manjakaray izay nitifirana olona mpivarotra avy eny ambony moto. Ohatra ihany ireo fa ny mpitandro filaminana no antenain’ny olona mba hiaro azy ireo. Andrasana ny fahitana ireo mpitandro filaminana anarivony ireo eny an-tsena na eny amin’ny kartie mafana, indrindra fa amin’ny alina.